အမြင် နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စားမယ့် သူရှိမှာ မဟုတ်ဘူး. လို့ ရှင်ယွန်းမြတ်ပြောပြီ (ရုပ်/သံ) – Zartiman
အမြင် နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စားမယ့် သူရှိမှာ မဟုတ်ဘူး. လို့ ရှင်ယွန်းမြတ်ပြောပြီ (ရုပ်/သံ)
ယခုအခါမှာတော့ Fashion Magazine Myanmar မှ အင်တာဗျူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် သူမကတော့ အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရင် ဒူးရင်းသီးတောင်စားမယ့်သူရှိမှာ မဟုတ်ဘူး… ” ရှင်ယွန်း သူ့ရဲ့ စိတ်ကို တော်တော်လေး အထင်သေးသွားတယ်၊ ဘာ့ ကြောင့် ငါ့ကို ဒီလိုတွေ လုပ်ရတာလဲပေါ့”….. သူတို့ရဲ့ တဏှာရောဂါပိုးက ငယ်ထိပ်ကို တက်စောင့်နေလို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဒီလိုတွေ မြင်တာလေ…ဝေဖန်တာမဟုတ်ပဲ အောက်ဖဲလှန်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်…….လိုဆိုပြီးပြေကြာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
။သူမကတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေ ရဲ့ ဝန်းရံခြင်း ကိုခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များလာတဲ့ မော် ဒယ်အမိုက်စားလေးဖြစ်ပါတယ်။မြင်သူတိုင်းငေးလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြား ရဲ့တစ်ခဲနက် အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု အများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမပါ။
social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေ ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ လတ် တလောမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ GYM က အမိုက်စား ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ Fashion Magazine Myanmar မှ အငျတာဗြူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ သူမကတော့ အမွငျနဲ့ဆုံးဖွတျရငျ ဒူးရငျးသီးတောငျစားမယျ့သူရှိမှာ မဟုတျဘူး… ” ရှငျယှနျး သူ့ရဲ့ စိတျကို တျောတျောလေး အထငျသေးသှားတယျ၊ ဘာ့ ကွောငျ့ ငါ့ကို ဒီလိုတှေ လုပျရတာလဲပေါ့”….. သူတို့ရဲ့ တဏှာရောဂါပိုးက ငယျထိပျကို တကျစောငျ့နလေို့ မိနျးမတဈယောကျကို ဒီလိုတှေ မွငျတာလေ…ဝဖေနျတာမဟုတျပဲ အောကျဖဲလှနျတာမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ဘူးလို့ ထငျတယျ…….လိုဆိုပွီးပွကွောထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
။သူမကတော့ လတျတလော လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာမှာ အမြိုးသားတှေ ရဲ့ ဝနျးရံခွငျး ကိုခံနရေတာဖွဈပွီး လူကွိုကျမြားလာတဲ့ မျော ဒယျအမိုကျစားလေးဖွဈပါတယျ။မွငျသူတိုငျးငေးလောကျတဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မျောဒယျလျ ရှငျယှနျးမွတျကို သိကွမယျထငျပါတယျနျော။ မျောဒယျလျလောကကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွား ရဲ့တဈခဲနကျ အားပေးမှုကို ရယူပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံအားပေးမှု အမြားဆုံးရရှိထားတဲ့သူမပါ။
social media လောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျနသေူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ ဆကျဆီ ကပြွီး အမိုကျစားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျသူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိဖဘှေ့တျစာမကျြနှာမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ ပုရိသတှေ ဝနျးရံနေ ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ အမြားဆုံး တငျလရှေိ့တာတှရေ့ပါတယျ။ လတျ တလောမှာတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ လှရကျလှနျးနတေဲ့ GYM က အမိုကျစား ပုံလေးတှကေို ဖျောပွထား တာတှရေ့ပါတယျ။
ရင်ဖိုစရာကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်မူရှိနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်(ဗီဒီယို)
ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ အလှတရားတွေနဲ့ အပြတ်ဂေါ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ဗီဒီယို